MAGIX VEGAS Movie Studio Platinum 14.0.0.122 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Computer software Editor Video Editing MAGIX VEGAS Movie Studio Platinum 14.0.0.122
MAGIX VEGAS Movie Studio Platinum 14.0.0.122
Maung Pauk at 6:51:00 PM Computer software, Editor, Video Editing,
Video Edit လုပ်တဲ့သူတွေအတွက် သိပ်မိုက်တဲ့ Software ပါ.. သိပ်မကျွမ်းကျရင်တောင် နည်းနည်းပါးပါး တီးမိခေါက်မိရင် လုပ်တတ်တယ်.. အရင်က Windows Movie Maker နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်.. Effect တွေ၊ Transition တွေကလည်း မိုက်မှမိုက်.. ဈေးကလည်းကြီးတယ်.. 75 ဒေါ်လာတဲ့.. ကဲကဲ အလကားယူ..
Setup နဲ့ အရင် install လုပ်. ပြီးရင် ပိတ်ပစ်..
Crack ထဲက Folder2ခုနဲ့ file တစ်ခုကို copy ကူး.. icon ကိုညာကလစ်နှိပ်. Open File Location ကိုသွား.. ပြီးရင် Paste ချလိုက်.. Overwrite လုပ်မှာလားမေးရင် ၃ ဖိုင်လုံးကို Overwrite လုပ်ပစ်လိုက်.. full version ရပြီ...
Download Setup : 433.68 MB
Download Crack : 18.5 MB
Computer software, Editor, Video Editing
Computer software Editor Video Editing
DNine April 15, 2020 at 7:14 PM
Invalid link 'code'.
link သေနတေယ် ကိုပေါက် ကူညီပါဦး
ဒီထက်မက ပေါက်မြောက် အောင်မြင်ပါစေဗျာ
Wondershare Data Recovery 6.0.0.13
Programmer တွေအတွက် Emurasoft EmEditor Professiona...
Samsung FRP Tool (Nougat Support) 1.0
Y535D-C00 Dead Fixed and Network Fixed Firmware (1...
Odin Collection Pack for Samsung Smartphone
eMMC Adb Dumper
Mi Account Unlock Tool for All Mi Models
Xiaomi တွေကို Computer ကတစ်ဆင့် Online ကနေ Update ...